Nairobi: Kooxo hubeysan oo weeraray Suuqa caanka ah Westgate Mall • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Nairobi: Kooxo hubeysan oo weeraray Suuqa caanka ah Westgate Mall
Nairobi: Kooxo hubeysan oo weeraray Suuqa caanka ah Westgate Mall
September 21, 2013 - By: Khalid Yusuf
Kooxo ku hubeysan hubka daraandooriga u dhaca iyo Bambaanooyinka gacanta laga tuuro ayaa gudaha u galay Suuqa caanka ah ee Westgate oo ku yaal xaafada Westland ee magaalada Nairobi.
Kooxdan hubeysan ayaa rasaas iyo bambaanooyin la beegsaday dadkii ka adeeganayey xili suuqaasi uu ahaa mid si weyn u camiran. Westagate Mall ayaa lagu tilmaamaa suuqa ugu qaalisan ee ku yaal Nairobi oo ay ka adeegtaan dadka maalqabeenada ah iyo dadka ajaanibta ah oo ay ku jiraan diblumaasiyiinta.
Kooxda Weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inay Sadex irid oo kala duwan kasoo galeen suuqaasi iyagoo rasaas ooda uga qaadayey cid walba oo ka horyimaada. Weerarkan ayaa bilowday 12kii duhurnimo xili halkaasi ay dad badan ku sugnaayeen.
Illaa iyo hada macada tirada dhimashada balse warar horudhac ah oo laga soo xiganayo dadka goobtaasi kasoo baxsaday ayaa sheegaya in ay jiraan ugu yaraan 9 qof oo dhimasho ah, Booliiska ayaa ku hareeraysan suuqa iyadoo sidoo kale qaar badan oo kamid ah dadkii halkaasi ku sugnaa ay ku xaniban yihiin qeybo kamid ah Daaraha uu ka kooban yahay suuqaasi caanka ah.
Kooxda weerarkan soo qaaday ayaa la sheegay inay ku labisnaayeen tuute iyo dareeska dagaalka isla markaana ay wateen qoryaha Ak47, waxayna dadka qaar sheegayeen inay yihiin rag Soomaali ah, arrintan ayaan weli la xaqiijin.
Booliiska ayaa sheegay inaysan weli gacanta ku dhigin kooxda weerarkan soo qaaday, walow uu hada weli socdo hawlgalka.
Waa weerarkii ugu xooga badnaa oo ay dabley ku qaado suuq ku yaal magaalada Nairobi, iyadoo ay horey u jireen weeraro bambaano oo ka dhacay Nairobi kuwaasi oo ay dowladu horey ugu eedaysay inay ka danbeeyeen kooxda Al Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya.
Ciidamada Booliiska iyo kuwa militariga ayaa hada ku hareeraysan suuqaasi, iyadoo la sheegay in kooxdii hubeysnaa ay weli gudaha ugu jiraan dhismaha Suuqa Westgate.